जेलबाटै अवैध असुलीकाे धन्दा ! - Everest Dainik - News from Nepal
जेलबाटै अवैध असुलीकाे धन्दा !
काठमाडौँ — हत्याको अभियोगमा थुनामा रहेका समीरमान बस्नेतले जेलभित्रैबाट असुली धन्दा चलाएको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनीनिकट दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा बस्नेत सुन्धारास्थित केन्द्रीय जेलमा छन् ।
बस्नेतले आफूनिकटका व्यक्तिहरूलाई निर्माण व्यवसायी र सडक निर्माणको ठेक्का सम्हालिरहेकाहरूको व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराएर असुली धन्दा चलाएको सूचना पाएपछि ब्युरोले पवन खडका र सुरेन नगरकोटीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो ।
संगठित समूहको आडमा अवैध असुलीको धन्दा चलाइरहेका बस्नेतको समूहले २३ असोज ०७४ मा घरबाट कार्यालय जाँदै गरेका गौचनलाई शान्तिनगरमा गाडीभित्रै गोली प्रहार गरी हत्या गरेको थियो । हत्याको ३७ दिनपछि ब्युरोले घटनामा संलग्न मुख्य सुटरसहित ५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने अढाई महिनापछि मंसिर तेस्रो साता मुख्य योजनाकार भनिएका बस्नेत भारतमा समातिएका थिए ।
कान्तिपुर दैनिकमा जनकराज सापकाेटाकाे समाचार प्रकाशित छ ।